सहमतिको सम्भावित बुँदाबारेको समाचारले एकता भाँड्ने गरी कमजोर भएको हो नेकपा ? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जेटका दुई पाइलटबीच यतिबेला विश्वासको संकट गहिरिएको छ । नेकपामा गहिरिएको पछिल्लो संकट एकता भएयताको सबैभन्दा ठूलो संकट हो । संकटले स्वाभाविक रूपमा समाधान खोज्छ । यो प्रकृतिको नियम पनि हो । समाधानकै लागि भनेर नेकपाका न... पूरा पढ्नुहोस्
नेकपाको स्वास्थ्य स्थिति– गम्भीर तर स्थिर ! चासोका साथ हेरिएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद समाधानको प्रयासले आइतवार पनि मूर्तरूप लिन सकेन । पार्टीभित्र देखिएको संकटले नेकपाको स्वास्थ्य स्थितिलाई केही दिनका लागि स्थिर तर अझै जोखिम पार नगरिसकेको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । आइतवार म... पूरा पढ्नुहोस्
सरकारले व्यवसायीलाई हेरोस्, हामी बेरोजगार युवा परिचालन गर्ने अगुवा बन्छौं : दीपक मल्होत्रा कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) का कारण नेपालमा मात्र हैन, विश्वमा नै समस्या परेको छ । भूकम्प आउँदा नेपालमा मात्र आयो । त्यतिखेर विदेशबाट पनि सहयोगहरू प्राप्त भएको थियो । तर अहिले त्यो अवस्था छैन । बाह्य मुलुकमा पनि कोरोनाभाइरसको महामारीले समस्या नै छ । उनीहरूले आफ्न... पूरा पढ्नुहोस्
नेकपाका सकसपूर्ण ४८ घण्टा : शक्ति प्रदर्शनदेखि हार्दिकतासम्म ! बिहीवार भएका गतिविधिले फूटको संघार नजिक पुगेको विश्लेषण गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जोगाउन भन्दै बिहीवार रातिदेखि नै धेरै नेताहरूले दौडधुप गरे । नेकपाको यो सकस बुधवारबाटै शुरू भएको थियो । शुरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपक्षीय नेताहरूसँग छ... पूरा पढ्नुहोस्
कोरोना कसरी सर्छ, कसरी सर्दैन ? यस्ता छन् अनुसन्धानका नयाँ निष्कर्ष : डा. रवीन्द्र पाण्डे कोरोना भाइरस संक्रमणको समय बित्दै जाँदा धेरै अनुसन्धान भइरहेका छन् । यी अनुसन्धानका कारण पुराना मान्यताहरू विस्थापित भएर नयाँ मान्यताहरू स्थापित भएका छन् । कोरोना कसरी सर्छ ? यसको उपचार के छ ? रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका विषयमा नयाँ अनुसन्धान भइरहेको छ । हामील... पूरा पढ्नुहोस्
१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्छ– हरि रोका विशेष गरी सन् १९८४ को डिसेम्बरदेखि यता नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएर आएको हो । संरचनागत परिवर्तनको सट्टा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम ‘स्टकचरल एडजस्टमेन्ट’मार्फत विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्र गाँसिएको हो । यसमा गाँसिनु भनेको उदारवादको पछिल्लो चरण नवउद... पूरा पढ्नुहोस्
चीनको सडक रणनीति : यस्तो छ गलवान भिडन्तको भित्री कारण भारत र चीनबीच लद्दाखको गलवान उपत्यका लगायत विभिन्न स्थान अनि सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशमा सैन्य गतिरोध समाप्त हुने लक्षण देखिएको छैन । सैन्य तहमा अनेकौं चरणका वार्ता भइसकेका छन् र कूटनीतिक तहमा पनि वार्ता भइरहेको बताइएको छ । तैपनि दुई देशका सैनिक वास्तविक नियन्त्रण र... पूरा पढ्नुहोस्
के नेकपाको झगडा वार कि पारको स्थितिमा पुगेको हो ? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन माग गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा... पूरा पढ्नुहोस्
कार्डमाथि कार्ड फाल्दै ओली, अब पनि बन्द होला बोली ? चौतर्फी दबाबमा घेरिनुपरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बालुवाटारबाट एउटा 'फायर' खोले । आफूलाई पदबाट हटाउन खोज्ने भारतीय दलाल भएको आशयका साथ उनले 'एम्बेसी' र होटेलहरूमा आफूविरुद्ध चलखेल भइरहेको सुनाए । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले औपचारिक... पूरा पढ्नुहोस्
भारतीय दूतावासमाथि 'ओली आक्रोश' : बाछिटा कहाँसम्म, कहिलेसम्म ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन 'एम्बेसी' र होटेलहरूमा चलखेल भइरहेको भन्दै औपचारिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालको इतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले छिमेकी दूतावासले आफूलाई हटाउन प्रयास गरेको अभिव्यक्ति दिएको यो पहिलोपटक हो । स्वर्गीय मदन भण्... पूरा पढ्नुहोस्
३७ वर्षका लागि राष्ट्रपति बन्ने योजनामा पुटिन, रुसी जनताले विकल्प नखोज्नुको यस्तो छ खास कारण रुसमा सन् १९९९ देखि लगातार सत्तामा रहेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आजीवन सत्तामा बस्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेकोमा बुधवार त्यससम्बन्धमा जनमतसंग्रह गरिने भएको छ । पुटिनको अहिलेको कार्यकाल सन् २०२४ मा सकिने भए पनि (मतदान खुला भइसकेको) बुधवारको जनमतसं... पूरा पढ्नुहोस्
नेकपाभित्र रडाको : ककपीटको झगडाले रनवेमा सन्नाटा ! यतिबेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ८ लाखभन्दा बढी कार्यकर्ताले स्थायी कमिटी बैठकलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सक्नेले नेताहरूलाई भेटेर/फोन गरेर मिलेर जानुपर्छ भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर नेताहरूलाई एकजुट हुन आग्रह... पूरा पढ्नुहोस्
नयाँ चरणमा विश्वको भूराजनीति : अबको लडाइँ १७ दुर्लभ पदार्थका लागि ! पृथ्वीमा रहेका अथाह प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउन शक्तिराष्ट्रहरूबीच संघर्ष हुने गरेको तथ्य नौलो हैन । तेल उत्खनन तथा प्रशोधनले जन्माएको शक्तिसंघर्ष तथा भूराजनीतिक उथलपुथलका बारेमा धेरै मानिस जानकार छन् । त्यसो त पश्चिम एसियामा भएको तेलको अथाह खानीका कारण महाशक्तिराष्... पूरा पढ्नुहोस्
स्थायी कमिटीको पूर्वसन्ध्यामा ‘फकाउने र एक्ल्याउने’ बालुवाटार रणनीति ! प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल केही दिन यता फुर्सदिला बनेका छन् । गत बिहीवारदेखि उनी काठमाडौँमा छताछुल्ल नेकपा-विवादको ‘कोत’मा टहलिन आइपुगेका छन् । प्रदेशको कार्यकारी अधिकारसहितका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्था... पूरा पढ्नुहोस्
भारतसँग हिंसात्मक झडपमा पीएलएतर्फ क्षति कति ? हताहतीको संख्या किन सार्वजनिक गर्दैन चीन ? लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच एक साताअघि भएको हिंस्रक भिडन्तमा मारिएका सैनिकको संख्या चीनले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । भारतले आफ्ना २० सैनिकहरू मारिएको तथा ७६ जना घाइते भएको सार्वजनिक गरिसक्दा चीनले चाहिँ संख्या लुकाउन खोज्दा अनेकथर... पूरा पढ्नुहोस्
बजेट 'रिभाइज' गरौं, राजनीतिक दबाबका कार्यक्रम हटाऔं– डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल [अन्तर्वार्ता] कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले ३ महिनाको समयावधि पूरा गर्नै लागेको छ । एकातिर सरकारले कुनै तयारी, योजना र व्यवस्थापनविनै ३ महिनासम्म गरेको लकडाउन निष्प्रभावी भइरहेको छ भने अर्कातिर लकडाउनको साइड इफेक्टका रूपमा अर्थतन्त्र धरासायी ... पूरा पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीको कुरै नगरौं, विज्ञान भनेको ढिपी कस्ने विषय होइन– डा. समीरमणि दीक्षित [अन्तर्वार्ता] कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगर्ने र सामाजिक/भौतिक दूरी कायम गर्न लगाइएको लक-डाउन पनि निष्प्रभावी भएको अवस्थामा नेपालम... पूरा पढ्नुहोस्
एउटा मुख्य कमी जसकारण चीनसँग युद्ध गर्न डराइरहेको छ भारत ! भारत र चीनबीच लद्दाखमा चलिरहेको सीमाविवाद हिंस्रक भिडन्तमा परिणत भएपछि युद्ध चर्किने आशंका गरिएको छ तर परिस्थितिलाई मत्थर पार्न वार्ता पनि भइरहेका छन् । दुई देशबीच सैन्य स्तरमा वार्ता चलिरहेको छ भने रुसले समेत यी दुई देशबीच कुराकानीका लागि पहल गरिरहेको छ । त्यसो ... पूरा पढ्नुहोस्
एमसीसी विवादमा प्रधानमन्त्री ओली– पार्टीका नेतालाई चिढ्याउँदै कांग्रेससँग 'चोचोमोचो' ! सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र केही सातायता 'दबेको' विवाद पुनः सतहमा देखा पर्न थालेको छ । यसपाली चाहिँ विवादको जड एमसीसी बनेको छ । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिने सम्झौता भएको करीब ५० अर्बको सहयोगलाई लिएर नेकपाका शीर्षनेताहरू दन्तबझानमा उ... पूरा पढ्नुहोस्
के आपतमा चीनले नेपाललाई काँध थापेको छ ? नेपालको राष्ट्रवादी संकथनमा भारतको विरोध र चीनको समर्थन केन्द्रमा रहने गरेको छ । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, ठालुको व्यवहार देखाउने र सीमा पनि मिच्ने गरेकाले नेपाली जनतामा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बनेको हो । चीनसँग चाहिँ सीमाविवाद नरहेको र... पूरा पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री ओलीले नमस्कार फर्काउन छाडेको डा. भट्टराईको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नमस्कार गर्दा नमस्कार फर्काउन पनि छोडेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्द...